Kwixesha elidlulileyo, ukufumana iVisa yaseIndiya kungqineke kungumceli mngeni kwiindwendwe ezininzi. I-Visa yoShishino lwaseIndiya ibingumceli mngeni omkhulu wokufumana imvume kuneVisa yabakhenkethi eIndiya yesiqhelo (eTourist India Visa). Oku kwenziwe lula ngoku kwenkqubo ethe ngqo yemizuzu emibini kwi-intanethi ngokusetyenziswa kobugcisa, ukudityaniswa kwentlawulo kunye nesoftware ebuyiselweyo. Yonke inkqubo ikwi-Intanethi ngaphandle kokufuna ukuba umhambi ashiye ikhaya okanye iofisi.
Jonga eli khonkco ukugcwalisa isicelo sakho kwi-intanethi.
Abemi abavela eunited States, iunited Kingdom, ECanda, e-Australia kunye Fransi ziphakathi kobuzwe obuvunyelweyo ukugqiba le nkqubo kwi-intanethi.
Abakhenkethi abaninzi okanye undwendwe oluneshishini abanalo umbono obambekayo wokuba i-Visa yaseIndiya ingasetyenziswa ngokupheleleyo kwiwebhu ngaphandle kokundwendwela nayiphi na indawo kwiNdlu yozakuzo yaseIndiya okanye kwiofisi yaseburhulumenteni yaseNdiya. I-Visa yeshishini laseIndiya inokusetyenziswa ngokufanayo kwiwebhu. Kwixa elidlulileyo i-Visa abafaki-zicelo babehambela rhoqo iiofisi zikarhulumente wase-Indiya, okanye ii-ofisi zozakuzo zaseIndiya, kwaye bachitha iiyure ezininzi zosuku bebambe imigca, betshisa ngexesha labo elixabisekileyo.
Kukho iiwebhusayithi ezingekho mthethweni ezithengisa iVisa yaseIndiya, ezingathembekiyo okanye ezihlawulisa abathengi. Ezinye zezi webhusayithi zifuna ngaphezulu kweyure ukugcwalisa isicelo se-visa eya e-India. Kule webhusayithi, nangona kunjalo, ukuba wenza isicelo se URhulumente waseNdiya osemthethweni I-Visa yeShishini okanye iVisa abakhenkethi, yonke inkqubo yokuqalisa ukugqiba imalunga nemizuzu emi-2 ukuya kweli-3.
Ungayigqibezela iVisa yaseIndiya ngokuthuthuzela iPC yakho ekhaya okanye eofisini. Inkqubo yeofisi ebuyile sele itshintshile indlela iiVisa zaseIndiya eziziswa ngayo kubakhenkethi baseIndiya. Iinkqubo zethu zeofisi ezingasemva ziqhubele phambili kakhulu ngokutshekishwa kwebhayometri, ukuqondwa kwempawu ebonakalayo kunye indawo enokufundwa yomazibuthe Iipasipoti ziqinisekisa ukuba akukho zimpazamo zomntu zingena ngaphakathi, kwisicelo sakho. Nokuba unokuba wenze impazamo ngokufaka inombolo yepasipoti engachanekanga, le software ephucukileyo ifumana impazamo kumfanekiso wencwadana yokundwendwela.
Ukudityaniswa ngokuthe ngqo koonobumba egameni okanye kwifani kunokubangela ukugxothwa kwesicelo seVisa saseIndiya ngamagosa okufuduka. Enye yeenzuzo ezibalulekileyo zesoftware kunye nobukrelekrele bokuzenzela obusekwe kwiinkqubo zokuziphilisa kunye nezokuzilungisa ezikwindawo esemva kule webhusayithi kukuba iimpazamo zedatha ezenziwa ngesandla ngenxa yegalelo lomntu kwipaspoti, ifoto, ikhadi leshishini lilungisiwe kwaye kuthintelwe oko kubangela ukugxothwa kwesicelo. Abahambi bamashishini baya e-India abafuna i-India Business Visa (i-eBusiness India Visa) abanako ukurhoxisa okanye ukulibazisa uhambo lwabo olubalulekileyo ngenxa yokungakhathali okuncinci.
Ishishini leVisa laseIndiya liyafumaneka apha.
Izizathu zoTyelelo lweShishini kwi-eBusiness Indian Visa
Ivumela ukubandakanyeka kwi-fairs yorhwebo, imiboniso kunye neefestile zeshishini.
Amagosa okufudukela eIndiya anendawo yokungafakwanga kwezinto ezinxulumene nokungahambi kakuhle kweenkcukacha ezivela kuxwebhu lokuhamba okanye ipasipoti. Njengokuhlalutywa kwedatha yembali edlulileyo, malunga neepesenti ezisi-7 zabagqatswa benza impazamo ekuqulunqweni kweenkcukacha, umzekelo, inombolo yabo yesazisi, umhla wokuphelelwa kwe-visa, igama, umhla wokuzalwa, ifani kunye / okanye igama labo / eliphakathi. Eli linani eliqhelekileyo elininzi kulo lonke eli shishini. Isoftware isebenzise i-backend yewebhusayithi yethu iqinisekisa ukuba akukho mpazamo injalo yenzekayo kwaye ipasipoti ifundwe kwaye itshatiswa ngokuchasene nokufakwa kwabagqatswa kwifom yeVisa yaseIndiya.
I-eVisa yaseIndiya, imvume yase-India yokundwendwela, okanye i-eTA yase-India ivumela abahlali bekhulu elinamashumi asibhozo amazwe ukuba baphume baye eIndiya bengakhange bafune nto yokuchongwa. Olu hlobo luvunyiweyo lubizwa ngokuba yi-eVisa India (okanye i-visa yase-India).
I-eVisa yaseIndiya yenza iindwendwe ukuba zihlale eIndiya kangangeentsuku ezilikhulu elinamashumi asibhozo ngaphakathi elizweni. Le Visa yaseIndiya inokusetyenziswa kwezi zizathu zilandelayo emva kokuzonwabisa, ukonwaba, ukhenketho, utyelelo lwamashishini okanye unyango.
Abantu abafaka isicelo se-eBusiness Indian Visa (iVisa yeShishini yaseIndiya) kwi-intanethi kule webhusayithi akufuneki benze amalungiselelo / ukubonwa okanye ukutyelelwa buqu kwi-Khomishini ePhakamileyo yaseIndiya okanye kwiofisi ekufutshane kwi-Ofisi ye-India.
Le Visa yeShishini laseIndiya ayifuni isitampu somzimba kwivisa. Abafakizicelo banokugcina i-PDF okanye ikopi elithambileyo ye-India Visa, ithunyelwe ngombane nge-imeyile, kwifowuni yakho ephathekayo, ithebhulethi okanye ilaptop, okanye kungenjalo bagcine ukushicilela ngokwasemzimbeni ngaphambi kokuhamba ngenqwelomoya okanye kwinqanawa yokuhamba ngenqanawa.
Intlawulo yeIndiya iVisa yeShishini (i-eBusiness Indian Visa) Intlawulo
Abahambi beshishini banokwenza intlawulo kwi-Visa yabo yaseShishini besebenzisa isheke, i-Debit Card, ikhadi letyala okanye iakhawunti yePayPal.
Ezinye iindidi zeVisa ye-Indiya ye-elektroniki ekwafumaneka kwi-intanethi yi-Visa abakhenkethi, i-Visa yeShishini, i-Visa ye-e-Medical, iVisa ye-e-Medical Visa, i-e-Convention Visa kule webhusayithi ngendlela ye-intanethi.
Izinto ekufuneka ubenazo kufuneka ufumane iVisa kwiShishini laseIndiya zezi:
Isazisi se-imeyile esisebenzayo nesisebenzayo
Ikhadi lokudlulela okanye ikhadi letyala okanye iakhawunti yePaypal
Amaxwebhu ayimfuneko eIndiya Visa kwishishini (eBusiness Indian Visa)
Abagqatswa bayongezwa ukongeza ukuba bayalayisha okanye bathumela i-imeyile yobuso babo kunye nefoto yokundwendwela, ezi foto zinokuskenwa okanye zithathwe kwifowuni ephathekayo.
Jonga amaxwebhu afuneka kwiVisa yaseIndiya.
Emva kwentlawulo ephumeleleyo eyenziwe ngabenzi-sicelo ngokubhekisele kwiVisa yabo yaseIndiya, baya kuthunyelwa kwikhonkco nge-imeyile ukuze balayishe okuncamathiselwe. Qaphela ukuba unakho kwakhona ukuthumela i-imeyile ukuba awukwazi kufaka iifayile; Eli khonkco lithunyelwa kuphela emva kokuba intlawulo ephumeleleyo yenziwe malunga nesicelo sakho.
Okuqhotyoshelweyo kunokuba yiyo nayiphi na ifomathi, njengeJPG, PNG okanye iPDP. Kukho imida yobungakanani ukuba ilayishwe kule webhusayithi.
I-Visa yeshishini laseIndiya ikhutshwa ngeentsuku ezine ukuya kwezisixhenxe zeshishini. Abahambi beshishini baya kucelwa ukuba banikeze amakhadi abo eshishini okanye batyikitye nge-imeyile. Ukongeza, iindwendwe zeshishini kufuneka zineedilesi zazo zewebhu kunye nedilesi yewebhusayithi yombutho wamaNdiya abazityelelayo ziyafumaneka. I-India Visa yabahambi abakhasayo yenziwe lula kwaye ithe ngqo ngokufika kwezixhobo ze-elektroniki kule webhusayithi. Izinga lokwaliwa alithandeki.
Abemi abavela kwilizwe elinekhulu elinamashumi asibhozo Ungasifumana isibonelelo sokugcwalisa kwi-Intanethi isicelo seVisa yeIndiya ngeenjongo zeshishini ngokwemigaqo yoRhulumente waseIndiya. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-visa abakhenkethi ayivumelekanga ngenxa yokuhambela i-Indiya. Umntu unokubamba zombini abakhenkethi kunye ne-visa yeshishini ngaxeshanye njengoko zikhethekile. Uhambo lweshishini lokufuna i-Visa yaseNdiya yoShishino. I-Visa e-Indiya ithintela izinto ezinokwenziwa.